China Cell Direct RT qPCR Kit Mugadziri uye Mutengesi | Foregene
200×20μl Rxns, 1000×20μl MaRxns
Foregene Protease Kuwedzera II
5 × Direct RT Musanganiswa
2 × Yakananga qPCR Sanganisa-SYBR
50 × ROX Revhisi Dhayi
■ Zvakareruka uye zvinobudirira: neCell Direct RT tekinoroji, RNA sampuli dzinogona kuwanikwa mumaminetsi manomwe chete.
The Chidimbu chemuenzaniso chidiki, zvakadzika semasero gumi anogona kuyedzwa.
■ Kubudirira kwepamusoro: inogona kukurumidza kuona RNA mumasero akagadzirwa muna 384, 96, 24, 12, 6-tsime mahwendefa.
■ DNA Eraser inogona kukurumidza kubvisa magenomes akasunungurwa, inoderedza zvakanyanya kukanganisa kwezviitiko zvinotevera zvekuyedza.
■ Optimized RT uye qPCR system inoita kuti nhanho mbiri RT-PCR dzokerese kudhindisa kuve kwakanyanya uye PCR ive yakanyanya, uye inopokana neRT-qPCR reaction inhibitors.
Makuriro ekushandisa: maseru akakwenenzverwa.
- RNA yakaburitswa nesampula lysis: inoshanda chete kune iyo RT-qPCR template yeichi kit.
- Iyo kit inogona kushandiswa kune zvinotevera zvinangwa: gene expression expression ongororo, kuongororwa kweRNA-mediated gene kunyararidza maitiro, kuongororwa kwezvinodhaka, nezvimwe.
Chikamu I cheichi kit chinofanira kuchengetwa pa4 ℃; Chikamu chechipiri chinofanirwa kuchengetwa pa -20 ℃.
Foregene Protease Plus II inofanira kuchengetwa pa4℃, usagwamba pa -20 ℃.
Reagent 2×Direct qPCR Sanganisa-SYBR inofanirwa kuchengetwa pa -20℃ murima; kana ikashandiswa kazhinji, inogona zvakare kuchengetwa pa4Storage yekuchengetedza kwenguva pfupi (shandisa mukati memazuva gumi).
Pashure: Lnc-RT Heroᵀᴹ I (Ine gDNase) (Super Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis kubva kuLncRNA)
Zvadaro: Nguva Yechokwadi PCR Easyᵀᴹ-Taqman
Sero Rakananga Rt-Pcr
Cellamp Direct Rna Gadzirira Kit YeRt Pcr
Maseru Anonongedza Rimwe Nhanho Qrt Pcr Kit